Tag: ije ara
Na 2015, e nwere nde mmadụ iri na atọ na otu nde ndị NCAA na March Madness, tinyere ndị na-ekiri vidio vidio dị nde 11.3. Egwuregwu kachasị ele anya dọtara ndị na-ekiri nde 80.7. Ọ bụrụ n’icheghị na ọ bụ nnukwu ihe, ịkwesịrị ịnwale ịrụ ọrụ n’obodo Indianapolis n’ọnwa a (ebe ọfịs anyị dị)! Anyị ga-arụ ọrụ n'ụlọ ọtụtụ ọnwa. Ihe omuma ihe omuma a nke Koeppel Direct gosiputara otutu uzo ndi ahia na ndi ahia gha agha